Barruu kee keessatti kofa maamilaa, yabbina, halluu, fi amaloota kabiroo waliin sararoota hirmachisuu nidandeessa.
Amaloota sararaa fi kallattii qindeessuuf, wanta fakkasaa Sarara akka gadiitti fayyadami:
Kabala waaltaawaa irratti, sajoo Faankshinoota fakkasaa agarsii cuqaaasi kamshaa fakkasaa banuu, fi sajooSararacuqaasi. Hantuuttee agarsiistuun gara mallattoo qaxxaamur-refeensaa tti jijjiirama sarara cinaa jiru wajjin.
Galmee kee keessatti, iddoo sararri jalqabutti cuqaasi. Qabduu hantuuttee gadi qabuu fi tuqaatti harkisi iddoo sarara itti xumuruu barbaaddu. Dabalees yoo furtuu Shift gadi qabde, sararoonni surdala, dhaabboo, fi shaffaxa fakkasuu dandeessa.
Yoo sararri kallatti fi dheerina sirrii qabaate qabduu hantuuttee gaddhiisi. Achiin sararoota baay'ee fakkasuu dandeessa. Faankshinii kana kabalaFakkasaa irraa furtuu Esc dhiibuun ykn sajoo Filuu cuqaasuun xumiri.
Sajoo Select cuqaasteen booda, tokkoo tokkoo sarara yeroo furtuu Shift gadi qabdu cuqaasudhaan sararoota hunda yeroo walfakkaataatti filachuu dandeessa. Baay'inni filannoo kun haalluu wajjummaa, dalgee ykn amaloota biroo ramaduuf si dandeessisa.
Sarara olaanu, cinaa ykn gadi keewwata galmee barruu barreessaa keessaa Dhangii - Keewwata - Borders filachuudhaan fakkasuu dandeessa.
Sararoota ofumaa Barreessaa keessaa
Yoo sarara haaraa galmee barruu Kitaabessaa keessaa arfiilee murfoo sadii ol barreessitee fi furtuu Saagi dhiibdu, arfiileen haqamuudhan dubbisni duraa sarara akka handaara jalaatti argata.
Sarara baaqee tokko uumuuf, murfiwwan (-) ykn murgadii ( _ ) sadii ykn sadii caaluu barreessi, kana booda Galchii dhiibi. Sarara dachaa uumuudhaaf ammoo, mallattoo qixxee (=), urjoowwan (*), dalduufaawwan (~), ykn malattoo haashii (#) sadii ykn sadii caaluu barreessi, kana booda Galchii dhiibi.
Handaara ofumaan fakkafamee haquuf, Dhangi'i - Keewwata - Handaaraalee filadhuutii, handaara malee fili.
Handaara ofumaan bakkabu'ame altokko gaabbuuf, Gulaali - Gaabbi filadhu.
Handaarawwan ofumaa dhaamsuuf, Meeshaalee - OfiinSirreessaa - Dirqaleewwan filadhuutii, Handaara fayyadami qulqulleessi.
Sararootaa fi wantoota fakkasaa kabiroo barruu kee keessatti saagdeeHTML keessatti hinqindaa'uu, kanaafuu kalatiin dhangii HTML keessatti alergamuu hindanda'u. Qooda isaa, akka saxaatooleetti alergamu.
Yabbina sararaa tokko yammuu galchituu, safartuu tokko miiltessuu nidandeessa. Yabbini sararaa zeeroon sarara rifeensaa keessaa yabbina kan pikselii tokkoo kan giddugaleessa bahaa ta'a.
Dhangi'i - Keewwata - Handaarota
Title is: Barruu keessatti sararoota fakkasuu